I-Betfair yasungulwa ngaphakathi 2000 kwaye ukusukela ngoko ezemidlalo zibonelela ngeParis, kumazwe amaninzi. Namhlanje yeyona ndawo inkulu yokuthengisa izinto eParis.
Ukususela ekudalweni kwayo, esekwe eLondon kwaye ibhaliswe kwikomkhulu laseBritane. Nangona kunjalo, kwi-february 2016 yerayisi, esekwe eDublin ukuze ujoyine.
ESpain, ulawulo oluchanekileyo lweelayisensi zokuzingela ngokusemthethweni Betfair.
Ubhejo – UKUFUNDA NOKUFUNDA
IBetfair likhaya lamaBritane elizinze eParis, inika ithuba elihle kunye nenkqubo ezona ntengiselwano zikhulu nezona zinobunkunkqele ezaziwa kwihlabathi liphela kwiParcel stock Betfair. Yeyona ncwadi ingubhuki inkulu kakhulu e-UK kwaye iyeyona nto igqwesileyo kwaye ihlonitshwa kwihlabathi, naseSpain.
KwiMiscasasdeapuestas siqhelene kakhulu neli phepha laseParis, kwaye uninzi luvela eBetfair. Ukongeza kwiinkalo ezininzi ezakhayo, ikwanazo izinto ezingalunganga esizame ukuzibonisa kolu hlalutyo silunikezelayo.
Inyaniso yokuba iBetfair yenye yezintandokazi zethu yinto enokuqondakala ngokulula ukuba ujonga icandelo lezemidlalo laseParis, apho ubona zonke izinto eziphambili zoluhlu lwangaphambili kunye nexabiso lomgangatho ofanayo kuyo yonke iklasi yebhola.
Imveliso yayo eyahlukileyo kunye neenkwenkwezi ngokungathandabuzekiyo yinkqubo yexabiso laseParis – Ukutshintshiselana nge-Betfair – Ukongeza ekubeni ngowokuqala ukungena ezivenkileni, isesona sikhulu kwaye sikhulu emhlabeni..
Le nkqubo ikuvumela ukuba udlale nabanye abakhweli hayi ngokuchasene nendlu ngokwayo, Ubhejo yinto elungileyo, kuba awunyanzelekanga ukuba ube nexhala malunga neendleko ezikuthandayo, kodwa bahlawula ikhomishini encinci kwizibonelelo zabaxumi babo. Kodwa eyona nto ibaluleke kakhulu kuwe ... kukuba ukuthengisa kunamathuba angcono.
buza, Ubhejo, kodwa hayi kwindawo efanayo neBet365 okanye uWilliam Hill. Ukuba sithetha ikhasino, I-Betfair inikezela ngeendlela ezininzi zokukhetha kunye nokunikezelwa ezahlukeneyo kunye nephulo lokulungiselela ukuba ngumthengi.
urhwebo lwemveli kunye neParis
I-Betfair inikezela ngamava awodwa kubasebenzisi bayo, kuba isebenza njengendawo yokubheja ngokwesiko kunye neParis njengendawo yokuthenga. Kuyenzeka ukuba ubeke iParis kwindawo a “indlu” okanye ngokuchasene nabanye abadlali. Ukuza kuthi ga ngoku, U-Paris Cruz uthathe isigqibo sokwabelana okanye ukutshintsha.
Ngaphezulu koku 30 ezemidlalo
Okokugqibela, kodwa hayi ubuncinci, Uya kuba nethuba lokubheja ngaphezulu kwe 30 imidlalo esukela kwimidlalo yebhola, Iibhola okanye ibasketball, eyaziwa njenge-hockey yomkhenkce, ibaseball, tennis, iibhiliards.
IBetfair yamkela abaThengi abatsha ngeeMidlalo ukubheja kweeBhonasi banokuphumelela ukuya kuthi ga 100 €, yahlulwe yangamahlanu yasimahla eParis 20 € nganye. Njengomthengi kubheja kwezemidlalo, unakho ukufikelela kukhetho malunga 30 imidlalo eyahlukileyo.
Uya kufumana eyona nto ibaluleke kakhulu kwezemidlalo, kodwa baneengxaki zezopolitiko, kubandakanya nabanye, njengokugoba, i-surf kunye neendleko. Nangona ngokwesiko kugxile kwimidlalo yaseBritane, Unikezo lwangoku lugqibelele kakhulu kwaye phantse alukho kwamanye amazwe, kusungulwe iMidlalo.
Umdlalo webhola ekhatywayo waseBelfair
Kodwa ibhola ekhatywayo yeyona ndawo ineBelfair efanelekileyo. Kwimidlalo kukhetho olubanzi lwemidlalo kuzo zonke iikona zomhlaba. Ngelixa iBetfair ijolise ikakhulu ebholeni laseNgilani, ngeli xesha neqela lebhola ekhatywayo lalilungile kakhulu.
Yintoni esiyithandayo lukhetho olulungileyo lwezemidlalo kunye nokuvela kweParis ... ungadala isitayile seParis: Kwiligi yabadlali, Inani leembombo kumdlalo webhola ekhatywayo okanye ekwenziweni liqela elikhuselekileyo okanye lomdlali.
Nangona i-web isenokungabi nazinto zintle zehlabathi ingcono kunokuba ibonakala. Uya kufumana phantse yonke iligi, Iibhola ekhatywayo zaseParis kunye nezesondo; kwaye ndiyakuqinisekisa ukuba awuyi kufumana ithuba elingcono lokutshintshiselana ngeBelfair Soccer Paris.
Ukuba uthanda ukubheja kwi-Spanish League, kodwa nakwiBundesliga, Inkulumbuso kunye ne-Italiyane kuthotho ngaphandle kokuthandabuza ... kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe iinkonzo zeBetfair, Ohlala kwaye asebenze eParis.
I-Paris ekhuphisanayo kunye nenenzuzo ngokuthe ngqo
Ikhomishini yebhola ekhatywayo, I-tennis kunye ne-basketball ye-Betfair lelona khuphiswano kukhuphiswano lokungcakaza. Inayo nenkqubo ye-Turbo quota, enokuphucula ukubheja kwezemidlalo eSpain ukuba amaxabiso ayo asezantsi kunamanye amazwe aphesheya kwamazwe. Kwaye ukuba ngokubanzi benza igalelo elibalulekileyo kwimidlalo emikhulu.
Indlu ikwabonisa izinto ezahlukeneyo ezenzeka eParis. I-Paris kumdlalo okanye ugqatso ngamava ongafanele ukuba uphoswe.
olona goli liphezulu
IBetfair yenye yeebhetshu ezinconywayo uJulio Maldonado 'Maldini”, Intatheli yezemidlalo ikwangumxhasi osemthethweni weFC Barcelona kunye neArsenal eParis Euroleague. Uninzi lodidi lwehlabathi. Awuyi kufumana ireferensi engcono xa ukhetha iparameter. Jonga umfanekiso. I-Betfair iyenzeka ayinalo ukhuphiswano.
Imidlalo yeBetfair ibonelela ngeentlobo ngeentlobo zemidlalo yeBhasiketi yebhasikiti yaseParis kunye neligi. Ungafumana yonke into, ukusuka kwi-NBA kwibala laseYurophu naseYurophu, kodwa kukhuphiswano naseAsia okanye eMzantsi Melika. Guqula ukhetho olunqabileyo, Isindululo sethu kukuya kwinkqubo yeParis Betfair yokuTshintshana kwimisitho emikhulu efana neMidlalo yeOlimpiki, INdebe yeHlabathi yeHlabathi kunye ne-Euro ye-Euro.
Ukuba uya kwisiza sendlu, uzakubona ukuba kwiscreen sobhaliso uyakufaka ulwazi lwakho (kubalulekile ukuba yinyani), igama lomsebenzisi, iphasiwedi kunye ne-imeyile. Ukwenza iakhawunti yeBetfair kulula kakhulu, kuthatha ixesha kuphela.